Ogaden News Agency (ONA) – Gudomiyaha JWXO oo Fariin Abaaraha Ku Saabsan Udiraya Shacabka Soomaalida Ogadenya.
Gudomiyaha JWXO oo Fariin Abaaraha Ku Saabsan Udiraya Shacabka Soomaalida Ogadenya.
Waxaan ugu horeyn is xasuusinayaa in aan badino, baryada Ilaahay oon si dhab ah u xaqiijino una muujino, in abaaraha, macaluusha iyo cuduradda cid Ilaahay aan ahayn oo inaga faydi karta aysan jirin. Ilahayow adoomadaadii ayaan nahay adiga umbaana awood lehe, Ilaahow dhibka Abaaraha, Cudurka iyo Gumaysiga naga dul qaad:
اللَّهمَّ اسقِ عِبادكَ وبهائمكَ, وانشر رحمَتَك, وأَحْيي بَلَدَكَ الَمِّيت
Halgamayaal; dhaqanka Gumaysiga Itoobiya waxaa ka mid ah, in kolba kooxda xukunka Addis Ababa gacanta ku haysa, ay abaaraha ka dhigato hub ay kula dagaalanto shucuubta gumaysiga, isku dul noolaashaha diidan. Abaarta ka dhalata roobka oo xiligiisii lawaayo, waa arin Ilaahay keenay oon cidna lagu eedeeyn karo aysan jirin, hasa ahaatee macalusha iyo in gaajo loo dhamaado, waa qorshe Itoobiya ay shucuubta kula dagaalanto.
Hadaan taariikhda Itoobiya dib u milicsano; Sanadkii 1972-dii inkastoo haya’adaha dawliga ah digniin siiyeen, in gobollada Wallo iyo Tigree cunto la’aan iyo abaaro ka dhici doonaan hadana digniintii lasiiyay Itoobiya ma aysan aqbalin, oo kaydkii raashinka ahaa, ayay suuqyada caalamka ka iibsadeen. Sanad ka dibna waxaa gobolka ka dhacay abaarihii 1973-dii, waxaana gobollada waqooyi ee Tigree iyo Wallo macaluul ugu dhintay dad lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 100,000 – 200,000 oo kun oo qof.
Isla sanadkii 1973-kii ayuu Xayle Salaase xuska dhalashadiisii u sameeyay xaflad ay ku baxday 35 milyan oo doolar Waxaa si dhow loo xusuusan karaa abaarihii 1984-1985-tii ka dhacay Itoobiya. Dawit Wolde Goorgis oo madax ka ahaa hawlaha samafalka abaaraha, ayaa markuu iska dhiibay Mareykanka, u sheegay caalamka in uu Mingisto diiday in wax gurmad ah loo sameeyo gobolada ay ka socdaan kacdoonka ka soo horjeeda xukunkiisa.
Waxay siyaasadii Mingisto ahayd in aan loo gurmanin gobolada waqooyi ee Tigre oy gaajo iyo macaluul ugu dhinteen dad ka badan hal malyan oo qof (1,000,000). Halkaa waxaad ka garan-kartaan in siyaasadii Itoobiya ee ahayd in abaaraha loo adeegsado hub lagula dagaalamo hadba shacabkii tabaalaysan.
Maamulka Wayaanaha ee xukunka Itoobiya gacanta ku haya (TPLF/EPRDF), waxay ka fulinayaan Ogadenya siyaasad u dhiganta siyaasadii Mingisto uu kula dagaalamay shacabka Tigree oo ahayd in laga hor istaago gargaarka caalamka oo la go’doomiyo si shacabku gaajo iyo macaluul ugu dhintaan. Qorshaha Gumaysiga Itoobiya wuxuu ahaa mid aan waligiiba isbadalin. Waxaa kaloo hubaal ah oo dhamaan shucuubta Itoobiya ku nool ay wada arkeen, in maamulka Wayaanaha ah ee xukunka haysta uu 1000 jeer ka xun yihiin kana cadawsan yihiin xukuumadihii hore ee dalka haysan-jiray.
Hadaan intaa ku dhaafo taariikhda madow ee Gumaysiga Itoobiya. Taliska Gumaysiga ee Wayaanahu hogaamiyo, waxay xooga saareen inay caalamka ka qariyaan abaaraha iyo macaluusha Ogadenya ka jirta oo aan la ogaanin, taas oo lamid ah sidaan horey u soo sheegnay, siyaasadaha Gumaysiga Itoobiya kula dagaalamo shucuubta Gumaysiga iyo kali-talisnimada diidan. Waxay horey uga mamnuuceen dalka Ogadenia inay soo galaan hay’adaha samafalada iyo saxaafada madaxa banaan, saan loo ogaanin dambiyada dagaal iyo xasuuqa ay Itoobiya ka wado dalka Ogadenya.
Inkastoy Itoobiya ku dadaashay in aan la ogaanin xaaladda dhabta ah ee Ogadenya ka jirta, waxay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) ku guulaysatay, in aan gaadhsiino caalamka dhibaatada Gumaysiga Itoobiya sababay ee Ogadenya ka jirta taas oo ay kamid tahay macaluusha shacabka Soomaalida Ogadenya ku habsatay.
Waxaan ka codsanaynaa dhamaan haya’adaha caalamiga ah iyo ururka qaabilsan arimahaas iyo maamulada jaaliyadha in ay sii wadaan dadaalkooda sidii loogu gurman lahaa shacabka Soomaalida Ogadenia. Waxaa mudan inaan xuso, in dembiyada dagaal ee shacabka Soomalida Ogadenya laga galayo, gacmaha fulinayo ay yihiin, kuwa magaca Soomaaliyeed sheegta oo Gumaysiga daba-dhilifka u ah, hasa ahaatee “loo carbiyay sida ayda lagu ugaadhsado” oo kale.
Waxyaabaha ka dhacaya Ogadenya ee wakiilada Gumaysiga u fadhiya Jigjiga ay fulinayaan, ma aha dhaqan horey usoo maray shacabka Soomalida Ogadenia meel ay joogaanba. Dhaca iyo boobka hantida yar ee ku hadhay qoysaska tabaalaysan, nimanka cadawga ah ee fulinaya waa in la diiwaangaliyaa oo kolba sida suurtagalka ah looga hawl-galaa.
Ugu dambayntii, waxaan idinkula dardaarmi, in la’is kaashado oo qof walba qofka walaalkii ah ee tabaalaysan uu u gurmado, oo qofkaan waxba haysanin ha loo gargaaro oo yaan meel cidla ah looga tagin. Rasuulka CS wuxuu yidhi qofkaan naxariisan looma naxariisto من لا يرحم لا يرحم .
Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu umadeena ka dulqaado Abaaraha, Cudurada iyo Gumaysiga ragaadiyay.
Adm. Mahamad Omar.